Teknolojia manapaka - AOOD Technology Limited
Ny teknolojia fanapahana no fototry ny fivoaran'ny AOOD hatramin'ny nanorenany. Izahay dia mitarika teknolojia momba ny peratra elektrika hamahana ireo olan'ny fifindran'ny herinaratra amin'ny rafitra samihafa. Azontsika atao ihany koa ny mampifangaro amin'ny mason-tsivana fibre optika / coax rotary mba hanomezana ny mpanjifanay ny vahaolana mihodina feno miaraka amin'ny fahombiazana sy ny fahamendrehana tsara indrindra.
Tao anatin'izay 20 taona lasa izay, dia mijery bebe kokoa ny fangatahan'ny peratra slip amin'ny fampiharana avo lenta isika. Amin'ny sehatry ny fiarovana dia azontsika atao tsara ny mandray an-tanana maherin'ny an'arivony angovo avo sy hetra amin'ny toerana voafetra, ary miantoka ireo peratra slip ireo hanana fahombiazana ambony sy azo itokisana amin'ny tontolo masiaka. Namolavola andiana peratra kapsily kapitaly kely aza izahay mba hihaonana amin'ny signal multi-way sy ny filàna fampitana data amin'ny toerana tena voafetra. Amin'ny sehatry ny ranomasina dia azontsika atao ny manome ny singa misy peratra slip ROV miaraka amina tonon-taolana rotary fibre sy ny tsiranoka rotary, rakotra IP68 ary feno menaka ho an'ny asa any ambanin'ny tany. Amin'ny sehatry ny fitsaboana, ny peratra slip pancake slip ho an'ny scanner CT dia afaka manome hatramin'ny 2.7m amin'ny alàlan'ny fandefasana angona haingam-pandeha haingam-pandeha> 5Gbits.